UPDATE: Maxaad ka ogtahay hadalka Cajiibka ah ee uu Aadan Barre Ducaale ka sheegay Xafladda caleema saarka Axmed Madoobe? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaad ka ogtahay hadalka Cajiibka ah ee uu Aadan Barre Ducaale...
Kismaayo (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Aqbalida baarlamaanka dalka Kenya, Aaden Barre Ducaale oo maanta ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in aysan Kenya waxba dan gaar ah kalahayn arrimaha ku wajahan gudaha Soomaaliya, gaar ahaana Jubbaland.
Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in looga baahan yahay dhinacyada siyaasadda oo dhan, in ay midnimo la yimaadeen, wuxuuna cadeeyey in ay dadaal badan galinayaan sidii labada dal xariirkooda sare loogu qaadi lahaa.
Madaxweynaha dalka Kenya ayuu sheegay in uu ku faraxsan yahay doorashada Axmed Madoobe, wuxuuna sheegay in ay Kenya u aragto saaxiib dhaw Jubbaland, maadaama ay joogaan Boqolaal ka mid ah ciidamada dalka Kenya, kuwaas oo qorshahoodu yahay sugida Ammaanka.
“Ciidamada Kenya ayaan farta lagu fiiqin, Soomaaliya waxay ku joogaan AMISOM,Haddii nabad dhacdo daqiiqad joog maayaan, waxay la mid yihiin ciidanka dalalka Itoobiya, Uganda, Jabuuti & Burundi, yaan gacanta nala ku fiiqin” sidaas waxaa yiri Gudoomiyaha Aqbalyadda baarlamaanka Kenya Aden Barre Ducaale.
Ugu dambeyn, hoggaamiyaasha Soomaalida oo dhan ayuu ugu yeeray in ay muujiyaan biseyl siyaasadeed, ayna waajib tahay in wadajir iyo midnimo lagu gaaro arrimaha taagan.
hadal ka sheegay
xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale